DFS oo ka jawaabtay Eedaymo ay usoo jeedisay Hay'ada Amnesty International. - Horseed Media • Somali News
DFS oo ka jawaabtay Eedaymo ay usoo jeedisay Hay’ada Amnesty International.
Wasiir ku xigeenka Wasaarada Warfaafinta Dawlada Federaalka ah ee Soomaaliya Aadam Isaaq ayaa kasoo horjeestay warbixin ay soo saartay Hay’ada Amnesty International kaas oo ay uga hadlaysay heerka uu marayo xoriyadda hadalka tan iyo 7da bishii feb 2017 markaas oo xilka Madaxweynaha Soomaaliya uu ku guulaystay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo.
Amnesty ayaa sheegtay in mudadaas sadexda sano ah 8 weriye lagu dilay Soomaaliya, Sidoo kale waxay DFS ku eedaysay in Laaluush iyo Lacago ku bixisay warbaahinta si loogu tafatafiro wararka, sidoo akle waxay xustay in weriyayaal iyo dad saamayn leh laga xiray Akoonadii ay ku lahaayeen baraha bulshadu ay ku kulanto.
Wasiir Adam Isaaq ayaa sheegay in Amnestytii intii ay warbixinta diyaarineysay waxba ka weydiin, sidoo kale waxa uu tilmaamey in aysan jirin dad iyaga ka socda oo u yimid, sidoo kalena aan wax laga weydiin xaaladda saxaafadda Soomaaliya.
” Dowladda Soomaaliya waxa ay xurmad u haysaa oo dhowreysaa xorriyadda Saxaafadda iyo xorriyadda hadalka guud ahaan, Ma jirto cago jugleyn iyo ciriiri gelin lagu hayo saxaafadda iyo saxafiyiinta. Dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma jiro wariye u xiran, ama makamadeyntiisu socoto ama maxkamadi doondooneyso” Ayuu yiri Wasiirku.Waxaa jiray askar si xun ula dhaqmay saxafiyiin tallaabo laga qaaday lana xiray.
Wasiirka ayaa sidoo kale iska fogeeyay in Dawlada Federaalka ah ee Soomaaiya ay u diido weriyayaasha in ay xog helaan.
” Ma jirto xog helis laga hor joogsday saxaafadda, waxaase jirta in xilliyada qaar la xaddido galista goobaha ay qaraxyadu ka dhacaan, taas oo loogu daneynayo wariyeyaasha iyo dadka rayidka ah inta laga hubinayo in aan khatar kale ka jirin goobta. Marar badan waxaa dhacda in qarax labaad ka dhaco goobta, taas oo ay wariyeyaal iyo dad kaleba wax ku gaaraan, waxay horay uga dhacday Hoteel Saxafi, Dayax, Hooyooyinka, Jazeera iyo goobo kale oo mararka qaar wariyeyaal wax ku noqdeen” ayuu yiri Wasiirk Aadam Isaaq.
Ugu danbayn waxa uu xusay in dawlada aysan cidi ka xirin baraha bulshada, waxa uu xusay in ay ku dhaqmaan Dastuurka Iyo Shuruucda kale ee dalka u yaal kuwaas damaanad qaadaya xorriyadda hadalka.